Ch 17 यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch 17 यूहन्ना
17:1 येशूले यसो भन्नुभयो यी कुराहरू, अनि तेस्पछि, आफ्नो आँखा स्वर्ग तिर अप उठाने, उहाँले भन्नुभयो: "बुबा, घडी आइपुगेको छ: आफ्नो छोरा महिमा, त्यसैले आफ्नो छोरा तपाईं महिमा गर्न सक्छ भन्ने,
17:2 तपाईं उहाँलाई सबै प्राणी अधिकार दिएको छ जस्तै, उहाँले तपाईंलाई उहाँको दिनुभएको छ जसलाई सबैलाई अनन्त जीवन दिन सक्छ भनेर.
17:3 र यो अनन्त जीवन छ: तिनीहरूले तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ कि, मात्र साँचो परमेश्वरको, र येशू ख्रीष्टको, जसलाई पठाएको छ.
17:4 म पृथ्वीमा तपाईं महिमा छ. म तपाईंलाई पूरा गर्न मलाई दिनुभएको काम पूरा गरेको छ.
17:5 र अब पिता, आफैलाई भित्र मलाई महिमा, म संसारको अघि तपाईंसँग थियो महिमा संग कहिल्यै थियो.
17:6 म संसारबाट मलाई दिनुभएको छ जसलाई मानिसहरूले आफ्नो नाम प्रकट गरेको छ. तिनीहरू तपाईंकै थिए, र तपाईंले मलाई तिनीहरूलाई दिनुभयो. र तिनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरेको छु.
17:7 अब तिनीहरूले तपाईंले मलाई दिनुभएको सबै कुराहरू तपाईं छन् भन्ने महसुस.
17:8 म तिनीहरूलाई तपाईंले मलाई दिनुभएको शब्दहरू दिनुभएको छ. र तिनीहरूले यी शब्दहरू स्वीकारेका छन्, र तिनीहरूले साँच्चै म तिमी देखि गयो भनेर बुझेको छु, र तिनीहरूले तपाईंले मलाई पठाउनुभएको विश्वास छ.
17:9 म तिनीहरूलाई लागि प्रार्थना. म संसारको लागि प्रार्थना गर्छन्, तर तिमी मलाई दिनुभएको छ जसलाई लागि. तिनीहरूले तपाईंको छन्.
17:10 र त्यो सबै मेरो तपाइँको छ, र त्यो सबै तपाईंकै मेरो छ, र म यस महिमित छु.
17:11 र हुनत म संसारमा छैन, यी संसारमा छन्, र म तपाईंलाई आउँदैछु. बुबा सबैभन्दा पवित्र, आफ्नो नाम तिनीहरूलाई संरक्षण, तिमी मलाई दिनुभएको छ जसलाई, तिनीहरूले एक हुन सक्छ भनेर, हामी एक हो पनि रूपमा.
17:12 म तिनीहरूलाई छँदा, म आफ्नो नाम तिनीहरूलाई संरक्षित. म तिमी मलाई दिनुभएको छ जसलाई गार्ड सहित छ, र तिनीहरू एक हराएको छ, perdition छोरा बाहेक, धर्मशास्त्रमा लेखिएको पूरा हुन सक्छ कि त.
17:13 र अब म तिमीहरूलाई आउँदैछु. तर म संसारमा यी कुराहरू बोल्ने छु, तिनीहरू भित्र मेरो आनन्द पूर्णतामा हुन सक्छ भनेर.
17:14 म तिनीहरूलाई तपाईंको वचन दिएको छु, र संसारले तिनीहरूलाई घृणा गरेको छ. तिनीहरूले संसारको छैनन्, जस्तै म, पनि, संसारको छैन.
17:15 तपाईं संसारबाट तिनीहरूलाई लिन भनेर म प्रार्थना होइन, तर तपाईं दुष्ट तिनीहरूलाई संरक्षण भनेर.
17:16 तिनीहरू संसारको छैनन्, जस्तै म पनि संसारको छैन.
17:17 सत्य तिनीहरूलाई पवित्र. तपाईंको वचन सत्य हो.
17:18 तपाईं संसारमा मलाई पठाएको छ जसरी, म पनि संसारमा तिनीहरूलाई पठाएको.
17:19 र यो म पवित्र भनेर तिनीहरूलाई लागि हो, ताकि तिनीहरूले, पनि, सत्य मा पवित्र हुन सक्छ.
17:20 तर म तिनीहरूलाई लागि प्रार्थना होइन मात्र, तर पनि ती लागि आफ्नो शब्द मलाई विश्वास मार्फत गर्ने हुनेछ.
17:21 त्यसैले तिनीहरू सबै एक हुन सक्छ. तपाईँ रूपमा, पिता, मलाई छन्, र म छु, त्यसैले पनि हामीलाई एक हुन सक्छ: ताकि संसारको तिमी मलाई पठाएको छ भनेर विश्वास सक्छ.
17:22 र तपाईंले मलाई दिनुभएको छ महिमा, म तिनीहरूलाई दिएको छु, तिनीहरूले एक हुन सक्छ भनेर, हामी पनि एक हो जस्तै.
17:23 म तिनीहरूलाई छु, र तपाईंले मलाई छन्. त्यसैले तिनीहरू रूपमा सिद्ध हुन सक्छ. र दुनिया तिमी मलाई पठाएको छ भनेर थाहा हुन सक्छ र तपाईं तिनीहरूलाई प्रेम गरेको, तपाईं पनि मलाई प्रेम गर्नुभएको छ जस्तै.
17:24 पिता, म छु जहाँ छ गर्नेछ, तिमी मलाई दिनुभएको छ जसलाई पनि मलाई साथ हुन सक्छ, तिनीहरूले तपाईंले मलाई दिनुभएको छ, जो मेरो महिमा देख्न सक्छ भनेर. तपाईं संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिलेदेखिनै मलाई प्रेम लागि.
17:25 बुबा सबैभन्दा बस, संसारको तपाईं ज्ञात छैन. तर म तपाईं ज्ञात छ. र यी तिमी मलाई पठाउनुभयो ज्ञात छ.
17:26 र मैले तिनीहरूलाई तपाईंको नाम प्रकट गरेको छु, र म प्रकट गर्नेछु, ताकि तपाईंले मलाई तिनीहरूलाई मा हुन सक्छ प्रेम छ जसमा प्रेम, र म तिनीहरूलाई मा हुन सक्छ भनेर। "